सेयर बजार Archives ~ Page 123 of 145 ~ Banking Khabar
१०.५ प्रतिशत बोनस सेयर वितरण गर्दै श्री इन्भेष्टमेण्ट
श्री इन्भेष्टमेण्ट एण्ड फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडका सेयरधनीले १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । कम्पनीले प्रस्ताव गरेको १०.५ प्रतिशत बोनश शेयर र ०.५५ प्रतिशत नगद लाभांश राष्ट्र बैङ्कबाट स्वीकृत भएको हो । सो लाभांश कम्पनीको साधारण सभाबाट पारित भएपछि शेयरधनीलाई …
त्रिवेणी विकास बैंकका सेयरधनीलाई १९ प्रतिशत बोनस सेयर
त्रिवेणी विकास बैङ्क लिमिटेडका सेयरधनीले १९ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । बैङ्कको भदौ २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त अनुपातमा बोनस सेयर दिने निर्णय गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक वर्षमा आर्जन गरेको मुनाफाबाट सो लाभांश वितरण …
बुधबार पनि ओरालो लाग्यो सेयर बजार : एक अर्ब ६५ करोडको कारोबार
बुधबार पनि सेयर बजार ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुँजी परिचालन भएको छ । दिनभरिमा एक सय ४५ वटा कम्पनीको २९ लाख ३१ हजार ९ सय ८४ कित्ता सेयर सात हजार दुई सय …
मेरो माइक्रोफाइनान्समा सेयर हुनेले १० प्रतिशत बोनस सेयर पाउने
मेरो माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडका लगानीकर्ताले आकर्षक लाभांश पाउने भएका छन् । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई १० प्रतिशत बोनश शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । बैङ्कको भदौ २२ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको …
हाम्रो विकास बैंकका लगानीकर्ताले २५ प्रतिशत बोनस सेयर पाउने
हाम्रो विकास बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनश शेयर दिने भएको छ । बैंकको सोमबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई २५ प्रतिशत बोनश शेयर दिने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत दिएपछि र बैंकको …
सानिमा बैंक लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनश शेयर दिने भएको छ । बैंकको मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लगानीकर्तालाई १५ प्रतिशत बोनश शेयर र कर प्रयोजनका लागि शुन्य दशमलव ७९ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित …
यतिले अघि बढायो हकप्रद निष्काशनको प्रक्रिया : विक्रि प्रबन्धकमा एनसीएम नियुक्त
काठमाडौँको दरबारमार्गमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यति डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले हाल कायम चुक्तापुँजीको ५० प्रतिशत अर्थात दुई बराबर एक कित्ताको अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्काशनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसका लागि बैंकले एनसीएम मर्चेन्ट बैंकिङ लिमिटेडलाई सेयर निष्काशन तथा विक्रि प्रबन्धकमा …
नविल बैंकका सेयरधनीलाई ३० प्रतिशत बोनस सेयर !
नबिल बैंकका सेयरधनीले ३० प्रतिशत बोनस सेयर पाउने भएका छन् । मंगलबार बसेको बैंक संचालक समितिको बैठकले आफ्ना शेयरधनीलाई गत ३० प्रतिशत बोनश शेयर र १५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बैंकले गत आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट …
सिद्धार्थको नगद लाभांश अब सिधै लगानीकर्ताको बैंक खातामा
सिद्धार्थ म्युचुअल फण्डले लगानीकर्ताको बैंक खातामा नै नगद लाभांश जम्मा गरिदिने भएको छ । फण्डद्धारा सञ्चालित सिद्धार्थ लगानी बृद्धि योजना १ र सिद्धार्थ इक्विटी ओरियन्टेड स्किमले लगानीकर्ताको बैंक खातामा नगद लाभांश जम्मा गरिदिने भएका हुन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताले …
सेयर बजारमा फेरि किन लाग्यो रिभर्स गियर ? परिसूचक १८३४.८० अंकमा ओर्लियो
मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको सेयर कारोबार भएको छ । चार घण्टाको कारोबार अवधिमा १ सय ४१ वटा कम्पनीको २२ लाख ६० हजार ९ सय ४३ कित्ता सेयर ८ हजार दुई सय ९२ पटक खरिदविक्रि …